Wiko VIEW, uluhlu lokufaka kunye nescreen esingenasiphelo | Iindaba zeGajethi
UWiko yenye yeenkampani ezikhoyo eBerlin kumboniso wetekhnoloji ye-IFA. Uyenza ngezixhobo ezitsha. Enye yazo yi Wiko BUKELA, itheminali yokungena kwinqanaba eliqala ngexabiso ngaphantsi kwama-euro angama-200 kwaye inesikrini esingapheliyo.
Kule ndawo Ezinye izixhobo ezinje ngeWiko VIEW XL okanye iWiko VIEW PRIME zongezwa. Nangona kunjalo, ngeli xesha siza kugxila kwiselfowuni enika igama layo kule ntsapho intsha smartphones. Iphethe ingxelo yokugqibela ye-Android. Isikrini sayo siyifomathi enkulu kwaye sinokufezekiswa ngeendlela ezahlukeneyo zokugcina.
1 Infinity screen kwi-Wiko VIEW ukunciphisa izakhelo
2 Amandla kunye neenkumbulo
3 Iifoto zeekhamera: silibele malunga neekhamera ezimbini
4 Unxibelelwano kunye nokuzimela kwe-Wiko VIEW
5 Inkqubo yokusebenza kunye namaxabiso
Infinity screen kwi-Wiko VIEW ukunciphisa izakhelo
Into yokuqala eya kuthi ibambe iliso lakho le Wiko VIEW siscreen sayo se-intshi ye-5,7 kunye nesisombululo se-HD +. Ngamanye amagama: iiphikseli eziyi-1.440 x 720. Khumbula ukuba luluhlu lokungena komenzi kwaye uninzi lwabasebenzisi la manani angaphezulu ngokwaneleyo ukuba onwabele umxholo odibeneyo.
Kwakhona, ifomathi yesi sikrini kukubonelela ngepanoramic ububanzi 18:9. Ke umsebenzisi uya kufumana amava okuntywila, ngokutsho kwenkampani. Kwelinye icala, ikwazile ukunciphisa izakhelo, ke imvakalelo yescreen ngaphandle kwesassassis inkulu ngakumbi.
Amandla kunye neenkumbulo
Ngaphakathi kule Wiko VIEW sifumana iprosesa esayinwe yiQualcomm. Imalunga ne-chip I-Quad-core Snapdragon 425 kwaye isebenza rhoqo nge-1,4 GHz 3GB RAM, into esele siyibonile kwezinye iiterminal ngexesha elifanelekileyo. Sithetha ngeMoto Moto X4, iqela elinokuba linyathelo elingasentla.
Okwangoku, kwinxalenye yokugcina, I-Wiko VIEW inezinto ezimbini: i-16 okanye i-32 GB. Nangona kumacala omabini uya kuba nesloty ekhoyo yokusebenzisa imemori khadi kwifomathi ye-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-128 GB ngaphezulu. Lumka, masingalibali ukuba izibuko layo le-USB yi-USB OTG, ukuze ukwazi ukudibanisa izinto zokugcina zangaphandle njengediski enzima okanye imemori ye-USB.
Iifoto zeekhamera: silibele malunga neekhamera ezimbini
Kwicandelo lokufota, i-Wiko VIEW ayikhethi khamera ngasemva kabini. Inkampani inesiko eliqhelekileyo kwaye ixhobisa i-terminal nge Inzwa enye ye-13 megapixel, kunye nefleshi eyakhelwe-ngaphakathi kwaye kunokwenzeka ukuba urekhode iividiyo ezigcwele ze-HD (1080p) kwii-30 fps.
Okwangoku, icandelo langaphambili linekhamera ye uqobo okanye ukufowuna ividiyo. Apha abakhange bayeke kwaye babhengeze a Inzwa ye-megapixel eyi-16 isisombululo. Ngoku, kuya kufuneka sibone ukuba zeziphi iziphumo ezibonelelwa zimbini.
Unxibelelwano kunye nokuzimela kwe-Wiko VIEW
Ibhetri eqhotyoshelwe kwi-Wiko VIEW yiyo Umthamo weemitha ezingama-2.900. Ewe, kungaphantsi kokunikezelwa ngabadlali bayo. Kwaye ngakumbi xa sijonga ukuba isikrini sayo asikho sincinci (5,7 intshi). Ngoku, uWiko uthi le bhetri iyakwazi ukubonelela ngexabiso ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-20 zexesha lokuthetha. Ke sinokucinga ukuba iyakunyamezela usuku lonke lomsebenzi ngaphandle kwengxaki.
Ngokunxibelelana, apha sinokuthi kukho iziphene. Umzekelo, ngekhe uhlawulise i-terminal ngaphandle kwentambo okanye usebenzise itekhnoloji yeNFC. Ukongeza, izibuko le-USB lokutshaja kunye nokudluliswa kwedatha ayilulohlobo lwe-USB-C, kodwa bakhethe izibuko lemveli le-microUSB. Ngoku, uya kuba nakho ukunxibelelana neBluetooth, iWiFi, iGPS kunye nokusebenzisa amakhadi amabini eMicroSIM kwisixhobo esinye.
Inkqubo yokusebenza kunye namaxabiso
I-Wiko VIEW inenye yeenguqulelo zamva nje ze-Android ezifakiwe. Kwaye kukuba umenzi-njengazo zonke-asebenzise iqonga likaGoogle lokumilisela iimveliso zabo. Kule meko sijamelene ne-smartphone esebenzisa Android 7.1 Nougat, iya kuhambelana nazo zonke usetyenziso kwivenkile kaGoogle Play.
Ekugqibeleni, I-Wiko VIEW ngoku inokuba yeyakho kwaye amaxabiso ayo aqala kwi-189 ye-euro. Esi sixa semodeli yomthamo we-16GB. Ukuba ufuna ukufumana imodeli engama-32 GB, kuya kufuneka uhlawule i-euro ezingama-199.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Wiko VIEW, uluhlu lokungena kunye nescreen esingenasiphelo